टाउकाको मोल तोक्ने देउवासँग प्रचण्डले घाँटी जोड्नुको रहस्य - Shirish News
टाउकाको मोल तोक्ने देउवासँग प्रचण्डले घाँटी जोड्नुको रहस्य
२०७८ श्रावण १९, मंगलवार १५:१२ बजे
करिब दुई दशकअघि प्रचण्डहरु शेरबहादुर देउवाहरुको सरकारसँगै शासनसत्ताविरुद्ध धावा बोलिरहेका थिए । पछि आफ्नो टाउकाको मूल्य तोक्ने शासक देउवाविरुद्ध आगो ओकल्न थाले ।
युद्धताका समानता, स्वतन्त्रता र समाजवादको नारा घन्काइरहेका थिए । भोक, प्यास गरिबी र अशिक्षाबाट पिल्सिएका निर्धा–निमुखा जनतालाई ठूला गफ दिइरहेका थिए । जनताको उनीहरुको गफलाई पत्याइरहेका थिए ।
दुर्गम र विकट भेगमा प्रचण्डहरुको प्रभावको पारो चढ्दो थियो । सशस्त्र संघर्षको मूल उद्देश्य नै देशमा सामन्तवाद, पुँजीवाद र वर्गीय विभेदको अन्त्य भनिएको थियो ।
शेरबहादुर देउवाहरुलाई वर्गसत्रु घोषणा गरिएको थियो । अर्थात् माओवादीको नजरमा देशको पछौटेपन, विभेद, दमन, शोषण र गरिबीको कारढा देउवाहरु थिए ।
दलित पिछडिएका सीमान्तकृत वर्गमाथि शोषण गर्ने शोषकको रुपमा देउवालाई चित्रित गरिन्थ्यो । माओबादी युद्ध देउवा प्रवृत्तिविरुद्ध भनिएको थियो । देउवाहरु प्रतिगामी मानिन्थे । तर अहिले परिवेश बेग्लै भएको छ ।
प्रचण्डको नजरमा एकदम अग्रगामी नेता भएका छन् । हिजो जोविरुद्ध माग राखेर आन्दोलन गरिएको थियो, जसले टाउकाको मूल्य तोकेको थियो, जसले राजालाई संसद बुझाएको थियो, त्यहीं मान्छे आज प्रचण्डलाई प्यारो लागेको छ । अग्रगामी लागेको छ । कुनै बेलाको दलाल, यथास्थितिवादी नेता आज एकदमै क्रान्तिकारी मानिएका छन् ।
धेरै भएको छैन, २०५९ वैशाख १० गते बसेको तत्कालीन शेरबहादुर देउवाको मन्त्री परिषद्ले माओवादी नेताका टाउकाको मूल्य २५ देखि ५० लाख तोकेको थियो । शेरबहादुरहरुको नजरमा प्रचण्डहरु तालिवान र बोकोहराम जत्तिकै आतंककारी थिए । आज हिजोका तीनै प्रचण्डहरुको समर्थनमा देउवा पाँचौपटक सत्ताको सिंहशानमा पुग्ने भाग्यमानी बनेका छन् । प्रचण्डको साम्यवादसम्मको यात्राका असल सारथि देउवा बनेर उभिएका छन् । युद्धका सारथि विप्लव, वैद्य र बाबुरामहरु भन्दा देउवाहरु प्यारो लाग्न थालेको छ, प्रचण्डलाई । यसले सत्ताको लोभका कारण कोही व्यक्ति कुन हदसम्म स्खलित हुन सक्छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ ।
धेरै भएको छैन, २०५९ वैशाख १० गते बसेको तत्कालीन शेरबहादुर देउवाको मन्त्री परिषद्ले माओवादी नेताका टाउकाको मूल्य २५ देखि ५० लाख तोकेको थियो । शेरबहादुरहरुको नजरमा प्रचण्डहरु तालिवान र बोकोहराम जत्तिकै आतंककारी थिए ।
हिजोका देउवा र अहिलेका देउवामा के त्यस्तो आमूल परिर्तन आएको छ र ? जसकारण प्रचण्ड पटक–पटक देउवाको सत्तायात्रामा सारथि बन्न लालायित छन् । कि हिजो राजालाई संसद सुम्पिएका कारण देउवा अग्रगमनकारी भए कामरेड ? या त आलम आतंकको पक्षमा वकालत गरेका कारण तपाईंहरुको केमेष्ट्री मिल्न थालेको हो ? कि त भ्रष्टाचार र राज्यदोहनमा उनले प्राप्त गरेको विगतको सफलताले तपाईंलाई लोभ्यायो ? देशलाई स्विटजरल्याण्डभन्दा स्मार्ट बनाउन देउवाको आवश्यकता देख्नु भयो ?
अब तपाईंको साम्यवादसम्मका असल सारथि देउवा हुन् ? उसो भए विगतमा गाउँगाउँबाट देउवाहरुलाई समर्थन गरेकै कारण निर्दोष सर्वसाधारणलाई किन लखेटनु भयो ? वैचारिक रुपमा कांग्रेस र देउवा समर्थक भएकै कारण किन निहत्था कार्यकर्तालाई सफाया गर्नुभयो ? किन कांग्रेस भएकै कारण हजारौं सर्वसाधारणलाई आफ्नो थातथलो छाडेर पलायन हुन विवश बनाउनु भयो ? यसको चित्तबुझ्दो जवाफ छ कामरेड ?
हिजो के कारणले देउवाहरुलाई वर्गसत्रु देख्नुभयो ? आज कसरी परम मित्र बन्न पुगे ? देउवा र कांग्रेसलाई समर्थन गर्न–नगर्न तपाईं र तपाईं को दल स्वतन्त्र छ । तर इमानदारीता र नैतिकतामा उठेका प्रश्नको जवाफ तपाईले दिनै पर्छ । पटक–पटक देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु थियो त किन निर्दोष सेना र प्रहरीका सिपाहीलाई जिउँदै जलाउनु भयो ? शेरबहादुरकै शरणमा जानु रहेछ त जीवनको वास्तविकता बुझ्न नपाउँदै दिलबहादुर रम्तेलहरुलाई किन शहीद बनाउनु भयो ? हजारौंको काख किन रित्तो बनाउनु भयो ? मैना सुनारहरुको जिजिविषा किन बीचमै अलप पार्नु भयो ? माडीमा किन रगतको बाढी बगाउनु भयो ? आखिर देशका सच्चा पहरेदार शेरबहादुर नै थिए भने होलेरीमा किन रगतको होली खेल्न खोजेको ?
अब तपाईंको साम्यवादसम्मका असल सारथि देउवा हुन् ? उसो भए विगतमा गाउँगाउँबाट देउवाहरुलाई समर्थन गरेकै कारण निर्दोष सर्वसाधारणलाई किन लखेटनु भयो ? वैचारिक रुपमा कांग्रेस र देउवा समर्थक भएकै कारण किन निहत्था कार्यकर्तालाई सफाया गर्नुभयो ?
अहिले तपाईंहरु संसद बचाउन देउवालाई समर्थन गरेको रटान रट्दै हुनुहुन्छ । संसद भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो भन्ने तपाईं हरु नै होइन ? अहिले संसदमा के भिन्नता पाउनु भयो ? हिजो राजतन्त्र थियो, आज गणतन्त्र छ । हिजो राष्ट्रप्रमुख राजा थिए आज राष्ट्रपति छन् । हिजो तपाईंहरु संसदीय प्रणलीको विरुद्धमा मान्छे मार्दै हिँड्नु भएको थियो । आज त्यही संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा वकालत गर्दै हुनुहुन्छ ।
जनताको आर्थिकस्तर र गरिबीमा के फेरबदल छ ? के डोल्पाली र मुगुबासीले चामालको भात खान दशैं कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ ? बझाङ र बाजुरेलीले सहजै नुन पाएका छन् ? चेपाङ र मुसाहरहरुले कन्दमुलकै भरमा जीवन गुजारा गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ ? अनि यो स्थितिमा के देख्नुभयो शेरबहादुरसँग प्रचण्ड कमरेड ?
शेरबहादुरहरु नै समृद्ध नेपालका सारथि रहेछन त १७ हजारको बलि किन चढाउन भयो ? तपाईंमा थोरै पनि परिवर्तनकारी र अग्रगमनकारी सोच बँचेखुचेको हुन्थ्यो भने कम्तिमा कांग्रेसभित्रै अर्को पात्र खोज्ने प्रयास गर्न सक्नुहुन्थ्यो । बहस गर्नपर्ने थियो । माधव नेपाललाई त विकल्प देख्ने आँट गर्नु भएन । जबरजस्ती देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने कारण के थियो ?
याे लेखककाे निजी विचार हाे । – नेपाल प्रेस
रौतहटबाट ४० किलो चाँदीसहित एक जना प्रहरीको फन्दामा
महोत्तरी सहित देशभरका सबै नेपाल–भारत सिमा नाका(बोर्डर) खोल्ने सरकारको निर्णय
खबर दर्पण असोज ६ गते PDF
निकै कष्टप्रद जीवन बाँच्न बाध्य छन् २ फिट ३ इन्च का बौन दास
पानीमा डुबेर एकै दिन दुई बालिका सहित तीन जनाको ज्यान गयाे
महोत्तरीबाट भारतीय रुपैयाँ सहित एक भारतीय नागरीक गिरफ्तार